အတွေးလွန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အတွေးလွန်
Posted by etone on Jun 30, 2011 in Short Story |7comments
ကျွန်မရဲ့ မွေးရာပါဝါသနာကိုက စူးစမ်းလေ့လာချင်တာရယ်… အယုံမလွယ်တာရယ်မို့ … တနေ့ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်တာနဲ့ ဗေဒင်ယတြာ အရမ်းဝါသနာကြီးသူ တယောက်အိမ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် …. ။ ရှေးယခင်မြန်မာများ ပြောဖူးကြတာ ကြားဖူးပါတယ် မွေးရာပါ ၀မ်းတွင်းစုန်းပညာဆိုတာမျိုးလေ …. ။ အထူးတလည် သင်ယူထားခြင်းမရှိပါသော်လည်း အမေ၀မ်းထဲမှာ နေစဉ်ကတည်းက တတ်လာခဲ့တာမျိုးလိုလေ… ယုံတော့မယံပေမဲ့ … အတင်းတော့ မပြောရဲပါဘူး ။ တော်ကြာ ထမိန်ခြုံလိုက်လျှင် စုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ….. ဟုတ်မဟုတ်မသိပေမဲ့ ကြောက်တာပေါ့ … ။ ဒါနဲ့ပဲ … မှော်ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းတွေ ပြောတတ်၊လုပ်တတ်တဲ့ အိမ်ရောက်တော့ ၀ါသနာအတိုင်း စပ်စုတော့တယ်… ဘုရားစင်အောက်က အမွှေးတိုင်ကိုတွေ့တာနဲ့ … တမူထူးခြားနေပါတယ်… သာမန်အမွေးတိုင်မဟုတ်ပဲ သိုးမွှေးကြိုးလေးတောင်ပတ်လို့ … အရောင်လေးကလည်း ယောကီရောင်ဆိုတော့ … တခုခုတော့ တခုခုပဲလို့ တွေးရင်း ကြောက်လာပါတယ်…. ။ လာရင်းကိစ္စလေး အပြီးပြတ် အောင် ပြောစရာရှိတာပြောပြီး တချိုးထဲ လစ်လာခဲ့တယ်… စိတ်ထဲမှာတော့ မသိုးမသန့်ပေါ့နော် … ။ ဘုရားပူစော်တဲ့ အမွှေးတိုင်တောင်ဗေဒင်၊ ယတြာနဲကလုပ်တယ်လို့ စိတ်ထဲ အပြစ်တင်မိရင်း …. ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ အထိ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေးမိနေပါတော့တယ်… ။
တရက်တော့ ညဘက်ရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် ထိုင်မိတဲ့ အခါ … အမွှေးတိုင်လေးထွန်းထားတာ တွေ့မိပါတယ်… သူကတော့ အမွှေးတိုင်လေးဆိုပေမဲ့ သူကလည်း သိုးမွှေးကြိုးလေးနဲ့ပါ အရောင်သာ ကွဲတာပါ… အ၀ါကြိုးစနဲ့ မို့ တရုတ်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းရောင်ပေါက်နေပါတယ် … ။ ကျွန်မလည်း သိချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတာကြောင့် ဆိုင်ရှင်ကို အဲ့ဒါဘာလုပ်တဲ့ ယတြာလည်း မေးကြည့်တော့ … အမွှေးတိုင်ထွန်းတာပါတဲ့လေ…သူပြောမှလား ကျွန်မသိတာပေါ့ အမွှေးတိုင်ထွန်းတာကတော့ … ။ စိတ်ကလည်း နည်းနည်းရှည်ပြီး ဘာလို့ အဲ့ဒီအမွှေးတိုင်ထွန်းတာလဲ ရောင်းကောင်းအောင်လား မေးတော့ … မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ … ကားကြီးနဲ့ လှည့်အလှူခံတဲ့ ဘုရားတွေ ကြွလာလျှင် အလှူငွေထည့်တဲ့အခါ ပြန်ပေးတဲ့ အမွှေးတိုင်ပါတဲ့ … ။ ဘာလို့ သိုးမွှေးချည်လေးတွေ ကပ်နေလဲတော့ သူလည်း မသိပါဘူးတဲ့လေ… ။ ဒီတော့မှ အရမ်းကို စပ်စုချင်တဲ့ စိတ်နဲက စိတ်ဝင်တစား သိချင်နေတဲ့ အရာက ဘာမှ အရေးမကြီးတဲ့ အရာပါလားသိတော့တယ်… ။ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ် ရယ်လည်း ရယ်ချင်ပါရဲ့ …. အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စပ်စုမှုက မိုက်မဲရာကျပေမဲ့လည်း ၀ါသနာမို့ ဖျောက်ပစ်လိုက်ဖို့တော့ မလွယ်တော့ပါဘူးလေ ။ ။
စူးစမ်းချင်တဲ့ စိတ်ရှိတာက ကောင်းပါတယ် etone ရယ်
အမှန်က ခုလိုစပ်စပ်စုစုလေး လုပ်ထားတော့ ကိုယ်မသိတာ ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့
တစ်ခါတစ်လေသာ ဒီလို ဘာမှ အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စမျိုးဆိုလဲ ကိုယ်လိုစူးစမ်းချင်တဲ့ သူနဲ့တွေရင်
သိုးမွှေးချည်လေးတွေ ကပ်နေတဲ့ အမွှေးတိုင်ဆိုတာကရော
မရှိခိုးနိး မလှစုန်းရိုး တဲ့..
သင်တန်းရှိတယ် သွားတက်ပါလား.. တရုတ်ကားတွေ ထဲကလို လေထဲမှာ ပျံဝဲပြီး တ၀ီးဝီးနဲ့ သင်တန်းသား အချင်းချင်း အစွမ်းတွေ ပြပေါ့.. ဟိဟိ..
တခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကြောက်စိတ်က ကိုယ့်ကို ပြန်လှန့်ပြီး
အဲဒါလေး ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး… အမွှေးတိုင်ဆိုလို့ ရွာထဲက လူတွေ အပြင်စာမဖတ်ဘူးနော်…။ ပို့စ်တွေ ကွန်မန်းတွေ ကြည့်ရုံနဲ့သိသာတယ်…။ တစ်ယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲကိုကွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ..။အတော်များများ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာလောက်ပဲ ဖတ်နေကြပုံရတယ်..။
အဓိက ကတော့ အချိန်မရတာပါ။